नेपालको बीमा बजार विस्तार हुँदै छ बीमा बिज्ञ डा. फत्तबहादुर केसी – Insurance Khabar
नेपालको बीमा बजार विस्तार हुँदै छ बीमा बिज्ञ डा. फत्तबहादुर केसी
प्रकाशित मिति : १ आश्विन २०७५, सोमबार १३:४३
काठमाडौँको तीनकुनेमा स्कुल अफ म्याथम्याटिकल साईन्स र स्कुल अफ विजनेसको संयुक्त आयोजनामा एक कार्यक्रमको उद्घाटन भएको छ । कार्यक्रममा बीमा बिज्ञ डा. फत्तबहादुर केसीले नेपालको बीमा बजार विस्तार भएको बताएका छन् । शैक्षिक तहहरुमा केही रुपमा पठनपाठन भएको छ, तर पनि बीमा बजारमा पूर्ण रुपमा विकास भई नसकेको अवश्था रहेको उनले बताए । विश्वविधालयमा मात्र नभई तल्लो स्तरमा पनि केही मात्रामा पाठ्यक्रम समावेश गर्दै बीमा शिक्षा विस्तार गरी स्वदेशमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु पर्ने कुरामा उले जोड दिए ।
नेपालमा बीमा व्यवसायको ७१ वर्षको पुरानो इतिहास रहेता पनि बीमा व्यवसायको व्यापक विकास हुन सकेको छैन् । यति लामो ईतिहास बोकेको बीमा व्यवसायमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहको छ । बीमा शिक्षाका लागि नेपालका विश्वविधालयहरुमा बीमा बारे अध्यापन गराउने दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको तितो यथार्थ पोखरा विश्वबिद्यालय, स्कुल अफ बिजनेस का प्राध्यापक डा. रबिन्द्र घिमिरेले बताए ।
बीमा एक प्राविधिक विषय भएर पनि होला बुझे जस्तो लाग्छ तर बुझ्न चाहि गाह्ै हुन्छ बीमा क्षेत्रमा उच्च शिक्षा हासिल गरेको जनशक्तिको धेरै खाँचो रहेको छ यसका साथमा बीमा शिक्षा प्रदायक विधालयहरुको पनि कमै रहेको छ, त्रिभुवन विश्वबिद्यलयकी शिक्षाध्यक्ष एवम प्राध्यापक सुधा त्रीपाठिले वताईन ।
हाल नेपालमा ३९ वटा बीमा कम्पनीहरुको विकास भई सकेको छ । तर पनि यी कम्पनीहरुमा एक्चुरी गर्ने जनशक्तिको अभाव रहेको छ । यस्तो अवश्थामा भारतीय जनशक्तिलाई मासिक ठुलो रकम रुपैयाँको पारिश्रमिक दिएर काम लगाउनु परेको छ ।
बीमा सम्बन्धी उच्चशिक्षा लिएका जनशक्ति तयार पार्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दुई बर्षदेखि एक्चुरल साईन्सको अध्यापन शुरु गर्दै आएको छ ।
बीमा शिक्षा सम्बन्धि एउटा छुट्टै पाठ्यक्रम र संकाय निमार्णमा योगदान पुर्याउने हेतुका साथमा ६ दिने कार्यक्रमको आयोजना गरेको आयोजकले जनाएको छ । नेपालको बीमा बजार साथै बीमा शिक्षामा पनि केहि सुधार आउने आशा यस कार्यक्रम आयोजकले लिएको छ । बीमा विज्ञहरु, प्राध्यापकहरु, विधार्थीहरु, बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरु र बीमा सगँ सम्बन्धित सरोकारवालाहरु बीच प्रशिक्षण कार्यक्रम रहेको छ । यस कार्यक्रमा नेपाल तथा भारतका बीमा विज्ञहरुको सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ ।
एनआईबीएल प्रगति र समृद्धि फण्डको बुक क्लोज मिति तय
साहस उर्जाले साउन २९ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन गर्दै